‘प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेका छौं’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत ३ गते १७:१९
पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले आक्रान्त छ। यस्तो बेला बलियो तयारी अपनाउनु नै वुद्धिमानी हुन्छ। नेपालमा अझैं भाइरसको संक्रमण भित्रिइ नसकेपनि त्यसको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा भने स्थानीय सरकारसम्म जुटिरहेका छन्। कोरोना नियन्त्रण लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ?
गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरासँग हेल्थपोस्ट नेपालका यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मेल्लेख गाउँपालिकाले के–के गरिरहेको छ?
सबै भन्दा पहिलो कुरा अहिले विश्व नै कोरोनाको सन्त्रासबाट आक्रान्त छ। हामीलाई पनि त्यो त्रासले छोड्ने कुरै भएन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ। हाम्रो गाउँपालिका मात्र नभएर अछाम जिल्लाका अधिकांश जनता रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। उनीहरूको आवागमन जिल्लामा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम छ।
हामी त्यस कुराप्रति सजक छौं। हामी कोरोना भित्र नदिन नै सावधान बनिरहेका छौं। त्यसका लागि हामीले आइतबार मात्रै कार्यपालिकाको मिटिङ बोलाएका थियौं। जसमा सबै वडाका वडा प्रमुख र चिकित्सकहरूको सहभागिता थियो। उनीहरूसँगको संयुक्त बैठकमा हामीले कोरोना जोखिमको पूर्व तयारीका विषयमा छलफल ग-यौं। कोरोना रोकथामका लागि सबै वडा समितिसँग बसेर रोकथाम तयारी समिति बनाएका छौं। भारतबाट आउने मान्छेको अनिवार्य रुपमा चेकजाँच गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ।
अरु तयारी नि के के छन्?
यस्तै हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्र्तगत दश लाख बरावरको अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्ने निर्णय पनि आइतबारको बैठकबाट गरेका छौं। हामीले अठार लाख रकम छुट्याएकोमा तुरुन्त दश लाखको अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेका छौं। पूर्व तयारी र जनचेतनाका लागि वडा प्रमुखको नेतृत्वमा स्वस्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौं।
आज पनि स्वास्थ्यचौकी प्रमुखहरूलाई बोलाएर यस विषयमा पूर्व तयारीका लागि थप छलफल गर्दैछौं। भोलि (मंगलबार)बाट औषधि खरिद गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। हाम्रो अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको कोरोनाको कारोकथामका लागि सजक र तयार रहनु नै हो । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रीत छौं। एसईई परीक्षा पनि नजिकिएकाले एसईई हुने केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्दैछौं।
यो त कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर गरिएको तयारी भयो, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अन्य काम के गरिरहनु भएको छ?
मेल्लेख गाउँपालिकामा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामी थुप्रो काम गरिरहेका छौं। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले थुप्रै बजेट बिनियोजन गरेका छौं। जनतामाझ जनचेतना मुलक कार्यक्रम लगेका छौं।
कति बजेट बिनियोजना गर्नुभाछ?
हामीले केन्द्रबाट आउने नभई गाउँपालिकाबाट मात्रै ८० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं।
तपाईको क्षेत्रका अस्पतालमा औषधिको मौज्दात कस्तो छ?
हिजोको स्वास्थ्यकर्मीसँगको बैठकबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार औषधि अभाव छैन। ३५ प्रकारका सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिहरू हेल्थपोष्टहरूसँग केही मैनाका लागि मौज्दात छ।
त्यसो भए निःशुल्क औषधीको उपलब्धता पनि राम्रै छ?
अहिले त्यस्तो औषधीको अभाव छैन। जनतालाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा राम्रोसँग उपचार पाइरहेका छन्।
तपाइको गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ?
हाम्रो गाउँपालिकामा आठ वटा वडा छन्। दुई जना स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी अभाव छैन। जनशक्तिको अभावले जनताले त्यस्तो समस्या खेप्नु परेको छैन।
यहाँको गाउँपालिकामा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ?
हामीले आठ वडा मध्ये एक नम्बर र दुई नम्बर वडामा एक घर एक धारा सम्पन्न गरिसकेका छौं। ६ नम्बर र ८ नम्बर वडामा यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने र अन्य वडाका केही केही ठाउँमा खानेपानीको समस्या भए पनि त्यस्तो जटिल समस्या छैन। समस्या भएका स्थानका लागि पनि आगामी वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने छौं।
अनि सरसफाइका क्षेत्रमा के गरिरहनु भएको छ?
हामीले वडा नम्बर ३ लाई सरसफाई मुक्त वडा घोषणा गरिसकेका छौं। अन्य वडालाई पनि त्यसको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने योजना छ। त्युको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
तपाइको गाउँपालिका जनतालाई के चाहीँ बढी स्वास्थ्य समस्या छ?
हाम्रोमा गाउँपालिकाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या नै हो। केही ठाउँमा हेपटाइटिस पनि देखिएको थियो। हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौं।
त्यस्तो खाले समस्या समाधानका लागि के गरिराख्नुभाछ?
बजेटमा पनि त्यस्ता खाले स्वास्थ्य समस्यालाई समेटने गरिरहेका छौं। यस वर्ष मात्रै हामीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियौं। गत वर्ष गेटा आँखा अस्पतालबाट डाक्टर बोलायर आँखा शिविर गरेका थियौं। यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि कांभ्रेबाट चिकित्सक बोलाएर शिविर सञ्चालन गरेका थियौं। पाठेघर खस्ने समस्या महिलाका लागि पनि शिविर सञ्चालन गरेका थियौं। अघिल्लो वर्ष १८ जना महिलालाई अडेलधुरा लगेर उपचार गरेर घरघरमा पु¥याएका थियौं। गाउँपालिका नजिकै बयलपाटा हस्पिटल पनि छ। केही समस्या हुँदा हामी त्यहाँ जान्छौं। त्यसले पनि हामीलाई ठूलो सहयोग गरेको छ। अहिले हामीले गरिरहेका काम पूर्ण होइनन्। गर्न अझै धेरै बाँकी छ। हामी क्रमिक रुपमा त्यो गरिरहेका छौं।